1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ
1 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 11:20 am
ကို Zeroc00l - အစီအစဉ်စီစဉ်ကြီးကြပ်သူ
ကို samurai - အစီအစဉ်စီစဉ်ကြီးကြပ်သူ
ကို ရှင်းသန့် - ငွေစာရင်း
ကျော်ခိုင် - ငွေစာရင်း
ကို solakoko - ငွေစာရင်း
ကို ရှင်းသန့် နဲ့ ကျော်ခိုင် ၊ ကို solakoko တို့ကို ငွေကိုင်တွေ အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ အလှူငွေကို သူတို့ဆီထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစ်ကိုတို့ ၃ ယောက်ကလည်း စာရင်းနဲ့ တိတိကျကျလုပ်ကိုင်ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ငွေထည့်ချင်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေပြေထည့်နိုင်အောင်လည်း ၃ ယောက် ပူးပေါင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်။
တာဝန် ၂ ခုလုံးမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။
အသင့်တော်ဆုံးလို့ ထင်ရပြီး ၊ ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ ၊ အားမယ့် သူတွေကို တာဝန်ပေးတာပါ။ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကူညီခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်ဖိုရမ် ၊ ကိုယ့်အိမ်အတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်တာ လုပ်ကြပါနော်။
2 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 11:31 am
$ƴǩǾ wrote: ကို Zeroc00l - အစီအစဉ်စီစဉ်ကြီးကြပ်သူ
ကောင်းပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ပို့စ်တင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်။ အလှူငွေလက်ခံတဲ့အကြောင်း။
3 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 11:34 am
ကာယကံရှင်တွေလည်း လုပ်နိုင်တယ် ၊ မလုပ်နိုင်ဘူး ပြောကြပါနော်။
လောလောဆယ်တော့ ဘဏ်အကောင့်မဖွင့်နိုင်သေးလောက်ဘူး။ ကျွန်တော်စာမေးပွဲပြီးရင် ကျွန်တော့်အဖေကို မေးပြီးတော့ အားလုံးစုပြီး တူတူသွားဖွင့်ကြမယ်။
4 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 11:40 am
လောလောဆယ်တော့ လာမယ့်လူစာရင်းကြည့်တာ 10 ယောက်လား 11 ယောက်လားပဲ
ပြီးတော့ Vote လုပ်ထားတာက အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်နော်
Guest အနေနဲ့ဝင် Vote လို့ ရတယ်နော်
5 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 11:48 am
အင်း။ မနက်ကထိရတယ်။ ကျွန်တော်တောင် နောက်ပြီးတော့ Vote လိုက်သေးတယ်။ (ခုတော့ Cancel လုပ်ထားပါတယ်) ပြီးတော့ ပိတ်ထားလိုက်ပြီ။
6 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 11:53 am
$ƴǩǾ wrote: အင်း။ မနက်ကထိရတယ်။ ကျွန်တော်တောင် နောက်ပြီးတော့ Vote လိုက်သေးတယ်။ (ခုတော့ Cancel လုပ်ထားပါတယ်) ပြီးတော့ ပိတ်ထားလိုက်ပြီ။
ကျွန်တော် Vote မထည့်တာက အပြင်လူတွေဝင်လာမှာစိုးလို့။ နောက်ဆုံးစဉ်းစားထားတာက လာမယ့် member စာရင်းအတိအကျရပြီဆိုရင် Keychain အပြင်ကို Thanks you Card လေးတွေပါပေးဖို့စဉ်းစားနေတာ။ အဲဒါကြောင့် နာမည်အတိအကျပေးဖို့ မှာထားတာ။ ပြီးတော့ တနင်္ဂနွေဆိုတော့ အဲဒီနေရာ လူများမှာလေ။ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဝင်လာကြမှာစိုးလို့။ ဒါဆိုရင် ဘဏ္ဍာရေးမှူးသုံးယောက်ရဲ့ လိပ်စာတွေကို တော့ပစ်အသစ်ဖွင့်ပေးထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။
7 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 11:58 am
အဲဒါကတော့ ဘဏ္ဍာရေးမှူးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ရမယ်လေ။
ဒီထဲမှာ တာဝန်ကျသူတွေက ကျွန်တော်တို့နဲ့ ညှိပေးပါနော်။
ပွဲအစီအစဉ်ကိုတော့ မူရင်း Office ထဲက Topic မှာဘဲ ဆက်ပြောပေးပါ။
ဒီမှာက တာဝန်ဘဲ ညှိကြတာပေါ့။
8 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 1:20 pm
နေပါဦး ငါတို့ကို ဘယ်သူကသိလို့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီး ဘယ်လို ပိုက်ဆံလာထည့်ကြမှာလဲဟင်။
9 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 1:24 pm
ဘဏ္ဍာထိန်းများအနေနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ (သို့) အလှူငွေလက်ခံနိုင်သည့် လိပ်စာများကို ပေးစေချင်ပါတယ်။
ပြီးရင် Member တွေကို တဆင့်ထပ်ကြေငြာရဦးမှာမို့လို့ပါ။
10 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 1:34 pm
မြောက်ဥကလာ အဝိုင်း ။ ရုံးသစ် ။ မေဓာဝီလမ်းဆုံ ။ ဥကာ
သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေး ။ လိုင်စင်ရုံး ။ ဘဝမြင့်
ဒါမှမဟုတ် [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။
ဖုန်းနံပါတ်က ၀၉၈၆၁၈၃၄၈ ပါ
11 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 2:32 pm
ကျနော်ကိုတော့ ဆက်သွယ်ချင်ရင် [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုအက်လိုက်နော်
နောက်ပြီးလိပ်စာကတော့သာကေတမှာဆိုရင် RGF အင်တာနက်ဆိုင် ရုပ်ရုင်ရုံမှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ
ဆန်းရှိုင်းယပ်တောင်ဆိုင်ဘေးမှာ ကျနော်ဆိုင်လေးရှိပါတယ် မြို့ထဲမှာဆိုရင် ရွှေဂုံတိုင်က Workgroup သင်တန်းကို
လာပေးလို့ရပါတယ် monday to friday morning 8:00am to 11:55 am အထိရှိပါတယ်
စိတ်မပူနဲ့ ကျနော်စီမှာ ပိုက်ပိုက်က ဆာမူရီုင်းနဲ့ ရှင်းသန့် နစ်ယောက်စာတော့ရပြီး
12 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 17th March 2010, 11:21 pm
ဘဏ္ဍာထိန်း များ ခင်ဗျာ ... ပိုက်ပိုက် လွှဲမယ်ဆိုရင် လွှဲလို့ရမယ့် နေရာကလေးရယ် ပြီးတော့ ပိုက်ပိုက်လွှဲရာမှာ လိုမဲ့ လိပ်စာတွေ ဘာတွေ ကိုလည်း ရေးပေးပါနော် .. ကျွန်တော် ဘယ်လို ချိတ်ရမယ်မသိလို့ပါ... တချက်လောက်ရေးပေးပါဦး ...
ပြီးတော့ ပွဲကို ဘယ်ချိန်လုပ်မလဲ မသိဘူးနော်.. လုပ်မယ့် အချိန် ကို အတိအကျသိရင် ပြောပြကြပါဦး..
13 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 8:07 am
ကျနော့်ကိုဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ solakoko[@]Gmail[.]com ပါ။
အလုပ်လိပ်စာက ပြည်လမ်း၊(၈)မိုင်ခွဲ၊မဟာစည်မှတ်တိုင်၊၊ရွှေနှင်းဆီလမ်းထဲမှာ Cursor Link အင်တာနက်ဆိုင်မှာရှိပါတယ်။
(Asia Motor Works ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း ဆိုပြီးစုံစမ်းရင် ပိုလွယ်ပါမယ်)
ဖုန်း-01 661807 ပါ(အင်တာနက်ဆိုင်မှ အကိုရီးကိုခေါ်ပေးပါလို့ ပြောပါ)၊ အဆင်ပြေရင် ဆက်သွယ်ရလွယ်အောင် လိပ်စာ ပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ်။
အခုလောလောဆယ် မရမ်းကုန်းအနီးတစ်ဝိုက်လောက်ပဲ ကျနော် တာဝန်ယူလို့ ရပါမယ်ခင်ဗျာ
နယ်မှ လွှဲရင် ကျနော့ဆီ ကလွဲပြီး အဆင်ပြေတဲ့ တခြားတာဝန်ရှိသူတွေဆီကိုလွှဲနိုင်ပါတယ်၊
တခြား Admin,Mod တို့ မှလဲ ကိုယ်နှင့်နီးစပ်ရာ လူတွေဆီက ကောက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ
14 ရံပုံငွေဇယား on 18th March 2010, 11:33 am
ငွေစာရင်း အတွက် ဒီလိုစီစဉ်ထားပါတယ်
M.I.T.R First Anniversary အတွက်ရံပုံငွေစာရင်း တင်ပြမှုဇယား
ငွေထည့်ပြီး စာရင်းထဲ မပါရင်လဲ အကြောင်းကြားလို့ ရမယ်
15 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 1:07 pm
ဟိုက်။ ၁ သောင်းတောင် ထည့်လိုက်ပြီလား။ ဟိ။
ထည့်ပြီးပြီနော်။ ကို sola စိုက်ရမယ်။
ခုမှဘဲ တကယ့်ကို Forum စစ်စစ်လေးဖြစ်လာတော့တယ်။
ကျွန်တော်လိုချင်တာ ဒီပုံစံဗျို့။ တဖြည်းဖြည်းဆက်ပြောင်းကြပါဦး။
အစ်ကိုတို့ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ပုံစံကို လိုချင်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဦးဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်မနေဘဲ ၊ တစ်ပြေးညီတူတူပြေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကို ကြောက်နေစရာလိုဦးမလဲ။
ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါသည် တဲ့ ကလေးတုန်းက သင်ခဲ့ရတယ်လေ။
ဟုတ်ပါပြီ။ အလှူငွေလက်ခံကြောင်းကို ကျွန်တော် ကြေငြာပါတော့မယ်နော်
16 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 1:11 pm
ငွေရေးကြေးရေးအပိုင်းတွေမှာ အခုကတည်းက အရှုပ်အရှင်းကင်းအောင် အပေးအယူကို လက်မှတ်လေးထိုးပြီးလက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့... ဘာမှတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမယ့်.. ကြိုတင်ရန်ရှောင်ပေ့ါဗျာ...
17 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 1:36 pm
ဟုတ်တယ်ဗျ။ အဲလိုလုပ်ထားတာ ပိုအဆင်ပြေမယ်။
ပြီးတော့ ဘဏ္ဍာရေးမှူးတာဝန်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ကိုပါ ထည့်ထားလိုက်ပြီ။
တော်ကြာ Founder က ခေါင်းရှောင်တယ် ပြောမှာစိုးလို့ပါ။
18 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 3:38 pm
K0ht3t wrote: ဘဏ္ဍာထိန်း များ ခင်ဗျာ ... ပိုက်ပိုက် လွှဲမယ်ဆိုရင် လွှဲလို့ရမယ့် နေရာကလေးရယ် ပြီးတော့ ပိုက်ပိုက်လွှဲရာမှာ လိုမဲ့ လိပ်စာတွေ ဘာတွေ ကိုလည်း ရေးပေးပါနော် .. ကျွန်တော် ဘယ်လို ချိတ်ရမယ်မသိလို့ပါ... တချက်လောက်ရေးပေးပါဦး ...
ကျေးဇူးပါ K0ht3t ။ ပိုက်ပိုက်လွှဲဖို့ကိစ္စက အဆင်မပြေနိုင်ရင်...................................
ဒီလိုလုပ်ပါလားအစ်ကို။ အစ်ကိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အစ်ကိုရန်ကုန်မှာ မိသားစုကျန်ခဲ့လား?
ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အစ်ကို့မိသားစုဆီကိုထည့်မယ့်အလှူငွေပမာဏကိုပြောပြထားလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့သွားယူပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
ရန်ကုန်မှာမဟုတ်ပဲ နယ်မှာဆိုရင်လဲ CB ကနေလွှဲရင် မြန်ပါတယ်အစ်ကို။ မ.စ.ဘ ကနေဆိုရင်တော့ တစ်ရက်လောက်စောင့်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ပွဲလုပ်မယ့်အချိန်ကတော့
ကျင်းပမည့်နေရာ - မြကျွန်းသာ (Game City ၏ဘေး၊ ရဟတ်ကြီးအောက် မြက်ခင်းပြင်)
ကျင်းပမည့်အချိန် - နေ့လည် 2:30 မှ ညနေ 6:00 အထိ
ကျင်းပမည့်နေရက် - 11.04.2010 (တနင်္ဂနွေနေ့)
19 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 4:52 pm
ငွေလွှဲမယ့်အကြောင်းများကို mail ဖြင့်သာပြောရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်... ငွေလက်ခံမယ့်သူတွေက နယ်သမားတွေအတွက်ပါ အကုန်လုံးရအောင် ဖိုရမ်ပေါ်မှာတော့ မေးလိပ်စာလေးတွေ တင်ထားပေးလိုက်ပေ့ါ... ရန်ပုံငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒိမေးတွေကို မေးပြီးအသေးစိတ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ညွှန်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်... ငွေလွှဲတာကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိပြီး အဆင်ပြေသလိုသာလုပ်လိုက်ပါဗျာ... အားလုံးကို မေးနဲ့ပဲမေးတာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်...
20 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 4:53 pm
mars wrote: ငွေရေးကြေးရေးအပိုင်းတွေမှာ အခုကတည်းက အရှုပ်အရှင်းကင်းအောင် အပေးအယူကို လက်မှတ်လေးထိုးပြီးလက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့... ဘာမှတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမယ့်.. ကြိုတင်ရန်ရှောင်ပေ့ါဗျာ...
ကိုမားပြောတာဟုတ်တယ် လာထည့်တဲ့ သူကို ဖြတ်ပိုင်းလေးဖြစ်ဖြစ် လက်ခံလေးတခုနဲ့ ကျတော်တို့ငွေလက်ခံတဲ့ သူဆီမှာဖြတ်ပိုင်းလေး တခုလုပ်ပေးနိုင်ရင်
ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် စေတနာနဲ့ကူညီပြီးလုပ်ကြတာကို အရှုပ်အရှင်း ဘာမှမဖြစ်ချင်လို့ပါ
21 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 6:36 pm
အင်း။ ဒါဆို ဖြတ်ပိုင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း။
ဘယ်သူတာဝန်ယူလုပ်ပေးမလဲဗျ။ အဲဒီ့လို ဖြတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူကျွမ်းကျင်လဲ။
အပေါစားဖြတ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ရင်တော့ မကောင်းဘူး။ သေချာလေးလုပ်မှကောင်းမယ်။
22 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 7:23 pm
ဘယ်သူမှတာဝန်ယူစရာမလိုပါဘူး... ဒါပေမယ့် 32 လမ်းနားတ၀ိုက်ကိုတော့ နည်းနည်းလမ်းလျှောက်လိုက်ရင် ရပါတယ်... ဒါမှမဟုတ်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ ပုံစုံလုပ်ပြီးသားကို ဆိုင်မှာသွားအပ်လိုက်ရင် ပိုတောင်ကောင်းသေး... ကိုဇီး အဆင်ပြေရင် ပုံစံလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါလား... ပြီးရင် ကြိုက်တဲံဆိုင်မှာသွားအပ်လို့ရတယ်..
23 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 7:50 pm
တာဝန်ယူခိုင်းတာ ဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူလုပ်လို့ အဆင်ပြေမလဲမေးတာပါ။ ဟီး
အင်း။ ဒါဆို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပုံစံလေးလုပ်ပြီး သွားအပ်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်နော့်
24 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 7:53 pm
ညီစွမ်းမလုပ်နဲ့လေ... စာမေးပွဲကနီးနေပြီမဟုတ်လား... ထားထားလိုက်ပါ... ဒါပေမယ့် စိတ်ပါရင်တော့လည်း လုပ်လိုက်မတားဘူး...
25 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ on 18th March 2010, 8:09 pm
ဟီး။ ကျွန်တော်လည်း လုပ်ပါဘူး။
26 Re: 1st Anniversary ပွဲ အတွက် တာဝန်များ